ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်း တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုး(၅)ဦး
17 Oct 2018 . 4:27 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရာသီတိုင်းလိုလို ပုံမှန်ခြေစွမ်းကို ထိန်းထားပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူနေဖို့ကတော့ သိပ်ပြီးမလွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ၁၉၉၂ – ၁၉၉၃ ဘောလုံးရာသီကစပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲလို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေထဲကမှ ဘောလုံးလောကကနေ အနားယူပြီးဖြစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ချန်ပီယံလိဂ်အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုး(၅)ဦးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၅) အင်ဇာဂီ Inzaghi
ပရိသတ်တော်တော်များများက အင်ဇာဂီ Inzaghi ကို အေစီမီလန်အသင်းနဲ့ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပေမယ့် အင်ဇာဂီဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ ကစားတဲ့အချိန်တည်းက အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကို ပြသနေသူပါ။ အင်ဇာဂီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဂျူဗင်တပ်စ် ၊ အေစီမီလန်အသင်းတွေနဲ့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၈၅)ပွဲကစားခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး(၅၀)သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အင်ဇာဂီဟာ အေစီမီလန်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၂)ကြိမ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
(၄) နစ္စတယ်ရွိုင်း Nistelrooy
ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းမုဆိုးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း Nistelrooy အနေနဲ့ ဒီစာရင်းမှာပါလာတာ သိပ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဖူး။ နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ PSV ၊ မန်ယူ ၊ ရီးယဲလ်အသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၈၁)ပွဲကစားခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး(၆၀)သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာကတော့ နစ္စတယ်ရွိုင်းအတွက် ကံဆိုးမှုတစ်ခုလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
(၃) ရှက်ဗ်ချင်ကို Shevchenko
အေစီမီလန်အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ရှက်ဗ်ချင်ကို Shevchenko ဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဂိုးမြူးတဲ့တိုက်စစ်မှုးပါ။ ရှက်ဗ်ချင်ကိုဟာ ဒိုင်နမိုကိဗ် ၊ အေစီမီလန် ၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၁၁၆)ပွဲကစားခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး(၅၉)သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ရှက်ဗ်ချင်ကိုဟာ အေစီမီလန်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၁)ကြိမ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
မိုနာကို ၊ အာဆင်နယ် ၊ ဘာစီလိုနာအသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ အွန်နရီ Henry ဟာကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၁၁၅)ပွဲကစားခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး(၅၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အွန်နရီဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့တော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၁)ကြိမ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
(၁) ရာအူးလ် Raúl
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ တော်ဝင်မင်းသား ရာအူးလ် Raúl ဟာဒီစာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ ရာအူးလ်ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ သမိုင်းတစ်ခုစိုက်ထူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို (၃)ကြိမ်ထိ ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ် ၊ ရှော်လ်ကေးအသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ရာအူးလ်ဟာ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၁၄၄)ပွဲကစားခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး(၇၁)သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Photo: stmed.net , Goal.com , Barca Blaugranes , Pinterest , The18
ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျး တဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှုး(၅)ဦး
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျကို ပွသနိုငျခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှုးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျရာသီတိုငျးလိုလို ပုံမှနျခွစှေမျးကို ထိနျးထားပွီး ဂိုးတှသှေငျးယူနဖေို့ကတော့ သိပျပွီးမလှယျတဲ့ အရာတဈခုပါ။ ၁၉၉၂ – ၁၉၉၃ ဘောလုံးရာသီကစပွီး ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲလို့ နာမညျပွောငျးလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဒီလိုစှမျးဆောငျရညျကို ပွနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ ဒီကစားသမားတှထေဲကမှ ဘောလုံးလောကကနေ အနားယူပွီးဖွဈကွတဲ့ ပရိသတျနဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ခနျြပီယံလိဂျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှုး(၅)ဦးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၅) အငျဇာဂီ Inzaghi
ပရိသတျတျောတျောမြားမြားက အငျဇာဂီ Inzaghi ကို အစေီမီလနျအသငျးနဲ့ စတငျရငျးနှီးခဲ့ကွပမေယျ့ အငျဇာဂီဟာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာ ကစားတဲ့အခြိနျတညျးက အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှကေို ပွသနသေူပါ။ အငျဇာဂီဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို ဂြူဗငျတပျဈ ၊ အစေီမီလနျအသငျးတှနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပွီး ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၈၅)ပှဲကစားခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုး(၅၀)သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ အငျဇာဂီဟာ အစေီမီလနျအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၂)ကွိမျဆှတျခူးခဲ့ပါတယျ။
(၄) နစ်စတယျရှိုငျး Nistelrooy
ခနျြပီယံလိဂျရဲ့ ဂိုးသှငျးမုဆိုးတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ နစ်စတယျရှိုငျး Nistelrooy အနနေဲ့ ဒီစာရငျးမှာပါလာတာ သိပျပွီးထူးဆနျးတဲ့ အရာတော့မဟုတျပါဖူး။ နစ်စတယျရှိုငျးဟာ PSV ၊ မနျယူ ၊ ရီးယဲလျအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးပွ ဂိုးတှသှေငျးယူခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ နစ်စတယျရှိုငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၈၁)ပှဲကစားခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုး(၆၀)သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရရှိခဲ့ခွငျးမရှိတာကတော့ နစ်စတယျရှိုငျးအတှကျ ကံဆိုးမှုတဈခုလို့ပဲ ပွောရပါလိမျ့မယျ။
(၃) ရှကျဗျခငျြကို Shevchenko
အစေီမီလနျအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့တဲ့ ရှကျဗျခငျြကို Shevchenko ဟာ သူ့ခတျေသူ့အခါက ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဂိုးမွူးတဲ့တိုကျစဈမှုးပါ။ ရှကျဗျခငျြကိုဟာ ဒိုငျနမိုကိဗျ ၊ အစေီမီလနျ ၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပွီး ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၁၁၆)ပှဲကစားခဲ့သလို ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုး(၅၉)သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ရှကျဗျခငျြကိုဟာ အစေီမီလနျအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၁)ကွိမျဆှတျခူးခဲ့ပါတယျ။
မိုနာကို ၊ အာဆငျနယျ ၊ ဘာစီလိုနာအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကစားခဲ့တဲ့ အှနျနရီ Henry ဟာကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၁၁၅)ပှဲကစားခဲ့သလို ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုး(၅၁)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ အှနျနရီဟာ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့တော့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၁)ကွိမျဆှတျခူးခဲ့ပါတယျ။
(၁) ရာအူးလျ Raúl
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ တျောဝငျမငျးသား ရာအူးလျ Raúl ဟာဒီစာရငျးရဲ့ ထိပျဆုံးမှာရပျတညျနပေါတယျ။ ရာအူးလျဟာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ သမိုငျးတဈခုစိုကျထူခဲ့သူဖွဈပွီး ခနျြပီယံလိဂျဆုဖလားကို (၃)ကွိမျထိ ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျ ၊ ရှျောလျကေးအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကစားခဲ့တဲ့ ရာအူးလျဟာ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၁၄၄)ပှဲကစားခဲ့သလို ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုး(၇၁)သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 35 mins ago